Warbixin: 7 Sabab Oo Madaxweyne Farmaajo Ku Qasbey Inuu Celiyo Dhalashada Mareykanka! – Goobjoog News
Madaxweynaha JF ee Soomaaliya Maxamed Cabdullahi Farmaajo ayaa maanta waxaa uu dib u celiyey dhalashada Mareykanka, halkaasi uu ku waayey xuquuqdii muwaadinnimada Mareykanka. Inkasta oo ay soo daahday waa tallaabo ay dad badan bogaadiyeen, oo horayna u ahaa dalabka shacabka Soomaaliyeed.
Mudane Farmaajo waxaa arrinkan horay ugu ogolaanayey dastuurka qodobkiisa 8aad faqradiisa 3aad oo u qoran: Qof leh jinsiyadda Soomaaliyeed lagama qaadi karo jinsiyadda Soomaaliyeed, xataa hadduu qaato jinsiyad dal kale, laakin hadda waxaa socdo qorshe dastuurkan qabyada ah ee dib u eegista ku socoto lagu daro in Soomaaliya aanu madaxweyne ka noqon karin qof 2 Baasaboor leh.
In dastuurka qabyo qoraalka ah lagu daro in Soomaaliya aanu madaxweyne ka noqon karin qof labo Baasaboor leh ma aha wax cajiib ah, oo waxaa uu qodobkaas isaga oo far waaweyn ah ku jiray dastuurkii 1960-kii, qodobka 71aad, dastuurkii 1979-kii, Qod. 81aad iyo Dastuurkii 1990-kii qodobkiisa 78aad.
Sababaha Madaxweyne Farmaajo Ku Qasbi Kara Inuu Celiyo Dhalashada Mareykanka:
1. In uu arkay dastuurka dib-u-eegista ku socoto, oo laga reebay qodobkii madaxweynaha u ogolaaney 2 Baasaboor, sidaa darteedna ansixintiisa uu si qasab ah ku weydoono Baasaboorka Mareykanka, taa darteed uu Farmaajo ka hor dhacay!
2. Inuu ku qancay xuquuqda uu siinayo sharciga xuquuqda Liiltirka iyo deeqaha siyaasiyiinta dowladda Federaalka, oo hadda horyaalla golaha aqalka sare ee BF!
3. Inuu doonayo ka qeyb galka bisha September shirka ama Kulamada Kalfadhiga soo socda ee Jimciyadda Qurumaha!
4. Inuu xujeynayo siyaasiyiinta 2 Baasaboor leh, ee rajada weyn kala lahaa iney tartamaan doorashada 2020-ka!
5. In arrintan horudhac u tahay ololihiisa doorashada 2020-ka iyo damaca ah inuu dib u soo laabto!
6. Inuu cadaadis uga yimid Mareykanka, oo sharciyada cusub ee soo baxay ee ka hor istaagayaan inuu sii heysto.
7. Inuu degenaashiyo ka helay ama dal kale uu u soo bandhigay guri, ceydh, nolol iyo deegaan noloshiisa inta ka dhiman ah!
Haddaba, waxaan akhristayaasha sidoo kale la wadaagi-doonnaa, Maxaa ka dhalanaya marka muwaadin Mareykanka uu iska celiyo dhalashada Mareykanka:
1. Sida ku qoran qodobka 349(a)(5) ee sharciga jinsiyadaha iyo socdaalka Mareykanka, qofka ka laabanaya ama dib u celinaya dhalashada Mareykanka waa ku horsameeyo tilaabadaasi diblomaasi ama safiirka dalka Mareykanka.
2. Lama ogola inuu diro E-mail, boosto iyo IWM, waa inuu dhaartaa, waana inuu su’aalo badan uga jawaabo waaxda jinsiyadaha iyo socdaalka Mareykanka ee raacsan wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga.
3. Waxaa uu weynayaa dhammaan xuquuqda uu ku heli jiray dhalashadii Mareykanka.
4. Qofka jinsiyadda Mareykanka iska celiya waxaa laga yaabaa haddii uu jinsiyad kale heysan inuu noqdo dhalasho la’aan, mana helayo xukuumad xuquuq siisa, oo heli-doono inuu wax lahaado, kireysto, shaqeeyo, guursado, waxbarto.
5. Qofka dhalashada Mareykanka ka laabto lama weydiin doono canshuur iyo dhibow ciidan ama arrimaha laga rabo muwaadinka caadiga ah.
6. Dhalasho la iska celiyo kama dhigna in aan lagu oogi karin dambiyo uu qofka horay u galaya ama uu geli-doono ama arrimo maaliyadeed uu bixin waayey sida biilka caruurta.
7. Haddii ay yihiin caruur 16 ka yar ama dadka baahiyaha gaarka ah, arrintaas waa mid adag, waxaa loo sheegayaa inuu sugo ilaa da’da 18 jir-ka.
8. Haddii qofka uu ka laabto dhalashada Mareykanka, dib uma codsan karo, oo waa go’aan aan laga laaban.
Dhageyso: DFS Oo Guryo Dib Loo Dhisay Ku Wareejisay Shacab Ku Sugan Deegaanka Sabiib Iyo Caanoole, Sh/hoose
Donde Comprar Viagra En Londres Buy Cialis Vancouver Kamagra En Neonatos Buy Cialis Propecia Calendario Zithromax For Pets
order viagra south africa http://hydroxychloroquine24.com – plaquenil generic cheap viagra germany
Hukjxq tpqsqc over the counter cialis buy cialis online
Ipbcfx uhnnsl Drug viagra order cialis online
Leave a Reply to Pre Written Research Papers Cancel reply
Puntland oo Gacanta Ku Soo Dhigtay Rag ay La Xiriirisay Inay Ka Tirsanyihiin Al Shabaab iyo Daacish
Kaydka Goobjoog Select Month January 2021 (184) December 2020 (267) November 2020 (166) October 2020 (168) September 2020 (153) August 2020 (263) July 2020 (352) June 2020 (511) May 2020 (307) April 2020 (264) March 2020 (227) February 2020 (211) January 2020 (171) December 2019 (174) November 2019 (153) October 2019 (168) September 2019 (169) August 2019 (238) July 2019 (230) June 2019 (233) May 2019 (236) April 2019 (172) March 2019 (195) February 2019 (173) January 2019 (249) December 2018 (261) November 2018 (235) October 2018 (297) September 2018 (366) August 2018 (329) July 2018 (310) June 2018 (295) May 2018 (348) April 2018 (366) March 2018 (358) February 2018 (421) January 2018 (616) December 2017 (337) November 2017 (356) October 2017 (360) September 2017 (323) August 2017 (399) July 2017 (309) June 2017 (360) May 2017 (411) April 2017 (429) March 2017 (394) February 2017 (391) January 2017 (455) December 2016 (424) November 2016 (486) October 2016 (595) September 2016 (421) August 2016 (479) July 2016 (344) June 2016 (359) May 2016 (332) April 2016 (327) March 2016 (373) February 2016 (350) January 2016 (313) December 2015 (266) November 2015 (278) October 2015 (372) September 2015 (408) August 2015 (441) July 2015 (445) June 2015 (468) May 2015 (456) April 2015 (7) March 2015 (7) February 2015 (10) January 2015 (155) December 2014 (627) November 2014 (639) October 2014 (400) September 2014 (351) August 2014 (294) July 2014 (203) April 2014 (1) January 2014 (1) December 2013 (1) November 2013 (1) September 2013 (1) May 2013 (1) July 2012 (1) July 2011 (1) June 2011 (2) May 2011 (1) February 2011 (1) November 2010 (1) February 2010 (1)
[url=http://oralkamagjelly.com/]contraindications to kamagra...
viagraprise generic viagra next day buy viagra online [url=h...
generic viagra (sildenafil citrate) buy with pay pal viagra...
buy cialis united states cheap cialis canada which is safer...